प्रचण्डले किन बारम्बार भारतीय राजदूत र रअ भेटिरहेका छन ! - Ujyaalo TImes - Same Vision, Different Angles
प्रचण्डले किन बारम्बार भारतीय राजदूत र रअ भेटिरहेका छन !
२०७६ साउन ६ गते सोमवार
काठमाडौं। नेकपा अध्यक्ष प्रचण्ड निवास खुमलटारमा ३ वटा मोटर सहित केही मान्छेहरू प्रवेश गरे। देख्नेहरूले त्यसलाई खासै चासो दिएनन्, किनकि प्रचण्ड निवासमा हरेक दिन आउने जाने भेटघाटको लेखाजोखा कसले गरोस्। तर त्यो टोलीमा न त परिवारका सदस्य थिए न त पार्टीका कार्यकर्ता थिए न त कुनै प्रशासक नै। त्यो टोली थियो भारतीय गुप्तचर संस्था ‘रअ’को टोली।
ती मोटरमा आएका गुप्तचर अधिकारीहरूसँग ‘रअ’का प्रमुख सामन्त गोयल पनि छन् भन्ने त्यहाँ सुरक्षामा तैनाथ प्रहरीहरूले समेत थाहा पाएनन्।
एकाएक बाहिरका अरु आगन्तुकलाई प्रवेश बन्द भयो, बाहिरका व्यक्ति तथा नेता कार्यकर्ता कसैलाई पनि भित्र प्रवेश गर्न दिइएन।
नेकपाभित्र बिभिन्न विभागहरू गठनलाई लिएर चलिरहेको विवादका बिच प्रचण्ड निवासमा ‘रअ’ का प्रमुख किन आए भन्ने कुरा अहिले सर्वत्र चासोको विषय बनेको छ। पछिल्लो समय नेकपाको एकता प्रक्रियाको समयमा प्रचण्ड र प्रधानमन्त्री ओलीबीच भएको आलोपालो प्रधानमन्त्रीहुने सहमतिको विषयलाई पनि प्रचण्ड गोयल भेटवार्तासँग जोड्न थालिएको छ। नेकपा भित्रै आलोपालो प्रधानमन्त्री हुनुपर्ने सहमति कार्यान्वयनका विषयमा चर्चा चलिरहँदा भएको दाहाल गोयल भेटलाई अर्थपूर्ण रुपमा हेर्न थालिएको छ। कतिपय राजनीतिक विश्लेषक र नेपाल भारत राजनीतिक सम्बन्धका जानकारहरू यसलाई सत्ताको नेतृत्व परिवर्तनसँग समेत जोडेर हेर्न थालेका छन्।
स्रोत अनुसार ‘रअ’का प्रमुख सामन्त गोयल निवासमै भेट्न आउने भएपछि अध्यक्ष प्रचण्डले बिहान हुने भेटघाट सबै रद्द गरेको चर्चा बाहिरियो। टोलीलाई स्वागत गर्न अध्यक्ष प्रचण्ड ढोकासम्मै आएको र सामन्त गोयललाई निकै आदरसाथ हात मिलाउँदै भित्र लगेको समाचार एकाएक भाइरल भयो।
तीन दिने भ्रमणका लागि हिजो आइतबार मात्र नेपाल आएको भारतीय गुप्तचर संस्था ‘रअ’ प्रमुख गोयलले प्रचण्डपछि प्रधानमन्त्री ओलीसँग समेत भेट्ने इच्छा गरेपनि भारतमा नयाँ सरकार बनेपछि कुनै राजनैतिक व्यक्तित्वसँग भेट नहुँदै गुप्तचर निकायका प्रमुखसँग कुनै एजेण्डा बिना म भेट्दिन भनेपछि उनले आफ्नो भ्रमण छोट्याएर आजै स्वदेश फर्किएका छन्।
यसैबीच भारतीय राजदूत मन्जिवसिंह पुरीले सोमबार दिउँसो साढे ४ बजे प्रतिनिधि सभाका संसदीय समितिका सभापतिहरूलाई रिसेप्सनका बोलाए पनि को को उपस्थित भए भन्ने कुरा खुल्न सकेको छैन।